Oomatiloshe baseNorway abanakulindeleka ukuba baphathe iDominica ngeKrisimesi emva kweNkanyamba uMaria
Ikhaya » Amanqaku eendaba akutshanje » Ukuhlaziya indawo ekuyiwa kuyo » Oomatiloshe baseNorway abanakulindeleka ukuba baphathe iDominica ngeKrisimesi emva kweNkanyamba uMaria
Iindaba zeManyano • Ukwaphula Iindaba Zamanye Amazwe • Iindaba eziziiNdaba zokuHamba • Ukuhamba ngeshishini • Iindaba zeDominica Breaking • iindaba • Iindaba zaseNorway zokuPhula • abantu • Safety • Tourism • uthutho • Ukuhlaziya indawo ekuyiwa kuyo
Iqela loomatiloshe baseNorway liqhube iphulo lomnikelo lonyusa phantse i-US $ 5000 ukuxhasa iCommonwealth yaseDominica, ilizwe elineziqithi ezincinci ezibethwe luhlobo lwenkanyamba uMaria nge-18 Septemba.
Oomatiloshe abasuka e-Oslo bamema abanye abathandi bokuhamba ngomkhumbi ngorhatya lweeCaribbean zokuzonwabisa kunye neentetho, ngezihloko ezinjengokuhamba ngolwandle kwiCaribbean, iinkanyamba zetropiki kunye nefuthe lotshintsho lwemozulu.
UMbutho weZizwe eziManyeneyo uqikelele ukuba kwizindlu ezingama-26,085 kwesi siqithi, kuqikelelwa ukuba zingama-23,488 izindlu ezonakaliswe ngokuphakathi okanye ngomonakalo omkhulu.
Umatiloshe owayeziqhelanisa noTuva Løkse wathetha ngamava akhe okuhamba ngolwandle lweCaribbean kunye nomnqweno wakhe wokubuyela eDominica:
“Uninzi loomatiloshe baseNorway kule minyaka idlulileyo bakonwabele ukuhamba ngolwandle kulwandle lweCaribbean, betyelele uninzi lweziqithi ezintle ezinomoya.
“Abanye bethu bathande isiqithi esihle saseDominica.
"Sifuna ukubuyisela into kubantu abanobubele nabanobubele baseDominica kwimizamo yabo yokwakha kwakhona isiQithi emva kweNkanyamba uMaria."
Iqela lidlulise i-3676 GBP ye-GBP kwi-Dominica Hurricane Maria Relief Fund-i-Commonwealth yaseDominica yokufumana inkxaso-mali ngokusemthethweni esekwe yiKhomishini ePhakamileyo yase-Dominica e-United Kingdom.
U-Lsekse uzimisele ukugcina iinzame zokunyusa ingxowa-mali ziqhubeka:
“Sinethemba lokukhuthaza nolunye uluntu lwaseScandinavia ukuba lwenze njalo. Kwaye sinethemba lokuphinda sibatyelele ngelinye ixesha kwixa elizayo. ”
Kutyelelo lwakutsha nje kwesi siqithi i-HRH iNkosana uCharles yathi umonakalo "ubonakala ngathi uhlaselwe yiArmagedon."
Inkulumbuso yaseDominica, oHloniphekileyo uRoosevelt Skerrit, obephakathi kwabo bashiyeke bengenamakhaya kulandela le ntlekele yendalo, uthembise ukulakha ngokutsha ilizwe libe lilizwe lokuqala ukumelana nemozulu.